Kandidà Volahaingo Marie Thérèse: « Aoka ho tony eo am-piandrasana voka-pifidianana ofisialy » | NewsMada
Kandidà Volahaingo Marie Thérèse: « Aoka ho tony eo am-piandrasana voka-pifidianana ofisialy »
Naneho ny heviny momba ny fizotry ny fifidianana depiote farany teo ny kandidàn’ny IRD, Volahaingo Marie Therese, nirotsaka tany Bealanana. Nanao antso avo ny tenany manoloana ny feo miely sy ny fanakorontanana ataon’ny sasany.
“Aoka isika ho tony eo am-piandrasana ny voka-pifidianana ofisialy avy amin’ny HCC, indrindra isika vahoaka any Bealanana. Tompon’ny teny farany io fitsarana io. Ho depiote ny mandresy eo ary afaka dimy taona indray manarina ho an’ireo tsy voafidy”, hoy izy. Niantso ny rehetra ny tenany mba tsy handairan’ny tsaho ary hilamina manoloana izao voka-pifidianana vonjimaika sy tsy mbola ofisialy izao. Nialoha izany, notsiahiviny fa nitarika ny tenany amin’ny voka-pifidianana tany an-toerana, saingy nisy ireo kandidà roa hafa tsy nahazaka izany ka niezaka ny nanao hetsika tsy nahazoana alalana sy nikasa ny handoro ny biraon’ny CED Bealanana.
Nahazo ny 38% ny kandidàn’ny IRD
Teo koa ny filazana fa nisehoana hala-bato iny fifidianana iny. “Nanana delege sy solontena avokoa anefa ny kandidà rehetra ary tsy nahitana fitarainana na fitoriana tamin’ny fitanana an-tsoratra (PV). Mbola narahina fampitahana ny voka-pifidianana indroa miantoana izany, saingy tsy nahitana tsy fitoviana teo amin’ny PV. Tsy nisy akory izany ny hosoka na hala-bato. Tahaka izany koa ny momba ny lisi-pifidianana nataon’ny Ceni. Nadio tanteraka ny fifidianana fa tsaho avokoa ny ankoatra izany”, hoy ihany ny kandidà Volahaingo na i Sosoa.
Tsiahivina fa mitarika amin’ny salanisa maherin’ny 38% ny kandidàn’ny IRD, Volahaingo Marie Therese amin’ireo kandidà efatra nifaninana. 33% kosa ny vato azon’ny mpifanandrina aminy, ny tsy miankina Andriamanantsoa Aziz Meraly.